कसरी राख्ने गर्मी र झरीमा खाद्य पदार्थ सुरक्षित ? जानाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it बच्चाको विकास कति बर्षमा कति प्रतिशत हुन्छ ? जान्नुहाेस
Up Next के हो पार्किन्सन्स रोग ? यस्ता छन यसका लक्षण र उपचार विधि
स्वास्थ्य रहन ठुलो सहयोग पुग्ने यी खानेकुरा
मानिसको शारीरिक अनि मानसिक बिकासका लागि महत्व कुरा भनेको खानपिनमा नै हुन्छ । खानपिन ले शारीरकि बिकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका…